Mhanya, isu ngatisimbise! | Zhenji
—— 11th refu-kure kumhanya nhangemutange
Mutungamiri wegumi nembiri kikkoman zhenji chikafu co., Ltd.'s refu-mujaho wekumhanya wakaitwa munaJune 15, 2019.Mumujaho uyu wakareba-unomhanya, kusanganisira maneja mukuru, kune vatori vechikamu 394 vari vese. Ivo vakakamurwa mumapoka mana zvichienderana nezera: pwere (murume nemukadzi) boka uye yepakati-pakati (murume uye mukadzi) boka.
Iyi nzira yakareba yekumhanya inotanga kubva kugedhi re zhao County bazi, kubva ku shita nzira kuenda kumabvazuva → shiqiao mugwagwa wezasi → huancheng nzira kuenda kumadokero → 308 nyika nzira yekuchamhembe → shita nzira yekumabvazuva iro gedhi refekitori, iyo yemakwikwi akazara makosi anenge mazana matatu emamita.
Vamhanyi, vakapfeka T-shirts dzakapihwa nekambani, vakazvishingisa pachavo pavaidzinganisa mumwe nemumwe mujaho.
Kumhanya, vanogona kutirege isu tikanganwe zera, uye nemoyo wavo wega kuti ushingi hwekufambira mberi pamwe chete!
Kumhanya, kunogona kutirege isu kukanganwa nezvechikadzi, chete nemoyo yavo pachavo iyo tenacity pamwechete!
Kumhanya, kunogona kuita kuti tiswedere pedyo pedyo nechinangwa, kunzwa kusununguka uye kumhanya, kunzwa kusunungurwa kwesimba uye mufaro, iri simba rakasimba rinotungamidzana, pamwechete kurukova runoyerera rwehukuru, huchiyerera mumugwagwa murefu, mumoyo yevanhu , vachifara uye vakatama.
Mushure memakwikwi akanyanya, boka rega rega rakasarudza vakakwikwidza gumi uye vakunda mubairo wekutanga, mubairo wechipiri uye wechitatu mubairo .Iyo mibairo zvinhu zvinoshanda senge yakakurumbira brand purifier, yakapetwa kwezhizha kaviri uye ina-dunhu rekitchen rack, inova kwete chete mibairo yeiyo yakareba-mujaho wekumhanya, asiwo kukurudzira uye kusimbiswa kwevashandi kuratidza simba ravo rakanaka.
Mwaka unotevera, ngatitambei zvakare!